Guddoomiyaha Gobolka Benaadir oo Dawladda Masar uga mahadceliyey Dib u Howlgelinta Iskoolka 15 May – Radio Daljir
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir oo Dawladda Masar uga mahadceliyey Dib u Howlgelinta Iskoolka 15 May
Febraayo 8, 2018 6:01 g 0
Guddoomiyaha gobolka Benaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) ayaa maanta ka qeyb galay munaasabad ballaaran oo dib loogu daah-furayay Iskoolka 15 May oo xirnaa muddo dheer.
Iskoolka ayaa waxana gacanta ku qaban doona Dawladda Masar oo iyadu si lacag la’aan ah wax ku bari doonta ardayda dhiganaya.
Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan waxa uu sheegay in dib u howlgelinta Iskoolkan ay ka dhigan tahay sida dawladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo uga go’an tahay in mudnaan gaar ah la siiyo waxbarashada dhalinta Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir Mudane Cabdiraxmaan Yarisow oo u mahadceliyey dawladda iyo shacabka Masar, ayaa tilmaamay ahmiyadda uu leeyahay Iskoolka 15 May, isagoo xusay in maamulkiisu mudnaan siinayo waxbarashada dadka gobolka Benaadir, si loo helo bulsho isku filan oo mustaqbalka dalkooda hoggaamin kara.
“Waxaan ka soo kabanay xaalad adag oo aan soo maraynay sanooyinkii colaaddu jirtay, inkastoo weli faanoole fara ka qodneyn, hadana waa xiligii aan fadhiga ka kici lahayn si mustaqbalka ina sugaya ee caruurteena loo dhiso. Dawladda Masar waxaan uga mahadceliyaa kaalinta muhiimka ah ee ay ka qaadanayso in Iskoolkii 15 May dib loo howlgeliyo, lana keeno macalimiin tayo sare leh, shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in mudnaan gaar ah ay siiyaan waxbarashada”. Ayuu yiri guddoomiye Yarisow.
Eng. Yarisow ayaa sheegay wadaniyadda iyo dal jaceylka oo la baro dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbarashada ku jira in kaalin fir-fircoon ay ka geysan karto in ay noqdaan jiil ka fiyow dhibaatooyinka halakeeyey dalka, taasi oo ah mid kamid ah wax yaabaha lagu baran doono Iskoollada ku yaala Muqdisho.
Safiirka Masar u fadhiya Soomaaliya Danjire Mowliid Ismaaciil waxuu ku dheeraaday doorkii ay dawladda Masar ku lahayd waxbarashada Soomaaliya iyo xiligan oo dalku ka soo kabanayo colaado. Waxuna safiirku balan-qaaday in Iskoolkan uu noqon doono mid hagaajiya barbaariyana dhalinyarada dhiganaysa.
Munaasabadda ayaa qeyb galay Wasiirro, Xildhibaano, Agaasime ku xigeenka Madaxtooyada masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Benaadir iyo Macalimiin ka socday dalka Masar oo lagu marti-qaaday xafladda.
Guddiga Amniga gobalka Bari oo Taliyihii Qeybta gobalka Bari shaqadii ka Hakiyaay (Akhriso)
Kulanka Haweenka – Taxanaha 31aad: Hormarka haweenku waa hormarka dalka (dhegayso)